Nin soomaali ah oo carruurtiisii loo ogolaaday xaaskiina loo diiday | Gaaloos.com
Home » Layaab » Nin soomaali ah oo carruurtiisii loo ogolaaday xaaskiina loo diiday
Nin soomaali ah oo carruurtiisii loo ogolaaday xaaskiina loo diiday
Aabe soomaali ah oo lugu magacaabo Maxamed Yuusuf Cali oo muddo sideed sano ka hor dalkaan Iswiidhan yimid, ayaa da daal dheer oo u galay in reerkiisa loo keeno, ayaa ugu dambeyntii laanta socdaalka ku wargeliyeen in carruurtiisa oo keliya loo ogol yahay, halka xaasikiisa loogu diiday soomaalinimadeeda oo aan cadeyn.
Laanta socdaalka ayaa Maxamed Yuusuf waxaa ay qaaday dhiigga DNA-ga si loo ogoaado labbo carruur ah oo u dhalay iney yihiin ilmihiisa iyo in kale. Warqad qoraal jawaab ah ah oo la xirriirta dhiiga laga qaaday ayaa loogu sheeay in wiil labo jir ah iyo gabadhiisa oo toddobo bilood jirta ay yihiin ilmihiisa sidaana ay ku imaan karaan Iswiidhan, hase ahaatee aan hooyadood soo raaci doonin sababo ay ku sheegeen inaan jirin cadeyn dhab ah oo soomaalinimadeeda muujineysa.
“Waa arrin xanuunkeed leh luguna qasbayo waalidka talaabo xun” ayuu yiri Maxamed oo sheegay inuu ka door bidayo inuu sii raaco diyaarad intii uu carruur iyo hooyadood kala kaxeyn lahaa. Maxamed Yuusuf oo dagan gobolka Nörrköping ee dalkaan Iswiidhan ayaa sidoo kale sheegay inuu ku qasban yahay in sanadkiiba uu dhowr mar ku soo booqdo reerkiisa Itoobiya.
Laanta socdaalka ee dalkaan Iswiidhan ayaan aqoonsaneyn dukoment -ti kasta oo ka soo baxa Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey ridistii dowladii dhexe, arrimahaana waxaa ay sooomaalida dalkaani ku keeneen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin inaan qofka soomaaliga ahi la aqoonsaneyn soomaalinimadiisa, sidoo kalena ku qaadan karin dhalashada dalka muddo shan sanno ah. Arrimahan soo la laabta ayaa imanaya xilli la filayo in dhawaan waraaqihiisa danjirenimo laga gudoomo safiirka ay Soomaaliya u soo magacoowday dalalka Iskaandanefiyanka ee waqooyiga Yurub Cawaale Kullane. Soomaali badan ayaa waxaa ay rajeeyneysaa in danjirahan cusubi wax ka badali doono dhibaatooyinka xagga socdaalka iyo jinsiyadaha ka heeysta soomaalida.
Title: Nin soomaali ah oo carruurtiisii loo ogolaaday xaaskiina loo diiday